ဦးထီးဆိုခဲ့တဲ့ ဘီးနံပါတ် OK 0122L ငယ်စဉ်ထဲက ဒါကဘာပြောချင်တာပါလိမ့် စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ် ခုမှသိရတယ်…ကိုယ်လိုပဲ မသိသူများအတွက် - Han Nyein Oo
ဦးထီးဆိုခဲ့တဲ့ ဘီးနံပါတ် OK 0122L ငယ်စဉ်ထဲက ဒါကဘာပြောချင်တာပါလိမ့် စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ် ခုမှသိရတယ်…ကိုယ်လိုပဲ မသိသူများအတွက်
ဦးထီီးဆုိခဲ့တဲ့ ဘီးနံပါတ္ OK 0122L ငယ္စဥ္ထဲက ဒါကဘာေျပာခ်င္တာပါလိမ့္ စဥ္းစားခဲ့ဘူးတယ္ ခုမွသိရတယ္…ကိုယ္လိုပဲ မသိသူမ်ားအတြက္
ဘီးနံပါတ္ OK 0122Lငယ္စဥ္ထဲက ဒါက ဘာေျပာခ်င္တာပါလိမ့္ စဥ္းစားခဲ့ဘူးတယ္ ။ ခုမွသိရတယ္ ကိုယ္လိုပဲ မသိသူမ်ားအတြက္ဘီးနံပါတ္ Ok 0122 L အဓိပ္ပါယ္ ဦးထီးဆိုတဲ့ စိုင္းခမ္းလိတ္ ေရးခဲ့တဲ့သီခ်င္းေတြ ဖန္တရာေတေအာင္ နားေထာင္ခဲ့ဖူးတယ္ ။
တစ္ခ်ိဳ႕ သီခ်င္းေလးေတြက ကိုယ္ထင္သလို ခ်စ္တာ ေမတၱာအေၾကာင္းေတြ မဟုတ္ဘူး…တဲ့ !!!တိုင္းေရးျပည္ေရး.. အၾကပ္အတည္းေတြ ၾကားထဲမွာ..လူထုရဲ့ ခံစားခ်က္ေလးေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ေမြးဖြားလာတဲ့ သီခ်င္းေလးေတြ ျဖစ္ပါသတဲ့… !
မေန႔ကမွ ဂ႐ုတစ္ခုမွာ အစ္ကို တစ္ေယာက္ ေျပာျပလို႔ သိရတာ.. !!!ဆရာစိုင္းခမ္းလိတ္ ေရးဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ဦးထီးရဲ့ ေမၿမိဳ႕မိုး သီခ်င္းဟာ…ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလး ျပင္ဦးလြင္ကို မဆီမဆိုင္ မႏၲေလးတိုင္းထဲ ထည့္ခဲ့လို႔… ဆိုခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးပါတဲ့…
သံလြင္ေခ်ာင္းျခားဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးက ျမစ္ဟိုဘက္ကမ္း.. ဒီဘက္ကမ္းမွာ တပ္စြဲထားတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ BCP တို႔ရဲ့ အာဃာတကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့တာပါတဲ့ !!!ရွိေသးတယ္.. !!!ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ.. ေခါင္မလုံရင္ စိုမွာပဲ… အစိုးရမေကာင္းရင္.. ကိုယ္ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ အရာမထင္ဘူးလို႔ ရြဲ႕ဆိုခဲ့တာပါ…
ဟိုးဘက္ေခတ္က ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားကို မီးေပးတာက ေလာပိတ ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္႐ုံႀကီးေပါ့…ေလာပိတ ေရတံခြန္ႀကီး ရွိေနတဲ့ကယားျပည္နယ္ေလးကေတာ့ ေမွာင္လို႔ မဲလို႔ေပါ့ေလ….အဲ့ဒီ့မွာ… ရန္ကုန္မွာ သာတဲ့လ… ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလး ျဖစ္လာရတာပါပဲ… !!!
သိပ္ၿပီး ပညာသားပါတဲ့ သီခ်င္းေလး ရွိေသးတယ္…က်ေနာ္တို႔ သိထားတဲ့…ဘီးနံပါတ္… OK 0122L ဆိုတဲ့ အေပါင္ဆုံး စက္ဘီးေလး အေၾကာင္းေလမင္းသခင္မေလး ချမာေလ..သိပ္ကို စြဲလမ္းရွာေန..ျပန္ေရြးလို႔ ရခဲ့ရင္ ျပန္ေရြးလို႔ ေပးလိုက္ခ်င္တယ္..တဲ့
ဘီးနံပါတ္.. OK 0122Lဆိုတာ…ေဖေဖာ္ဝါရီ 12 ျပည္ေထာင္စုေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို ရည္ရြယ္ပါသတဲ့..လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ေလးကို ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုတာ…
OK.. သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္
0..(သုည) ဆုံးရႈံးတာ မရလိုက္တာ…
L…Law. ဥပေဒကို ရည္ညႊန္းပါသတဲ့…ဒီအဓိပ္ပါယ်ေလးကို သိမွ ဒီသီခ်င္းေလး ျပန္နားေထာင္တဲ့အခါ ရွမ္းေတြရဲ့ ခံစားခ်က္ကို ပိုၿပီး နားလည္လာရပါတယ္..ဂီတ..အႏုပညာဆိုတာ ဒါပါလား… !!!ဒီသီခ်င္းေတြ ေရးခဲ့တဲ့ ဆရာစိုင္းခမ္းလိတ္ရဲ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ.. ဖန္တီးနိုင္မႈဟာ ေလးစားစရာ
သီခ်င္းမဟုတ္ေတာ့တဲ့ သီခ်င္းေတြပါပဲ ကိုယ့္ဥာဏ္နဲ႔ကိုယ္ဆို ဘယ္လိုမွ သိနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး…ေျပာျပတဲ့ အစ္ကိုကိုလဲ တကယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ..သည္ပို႔စ္ေလးကို ဖတ္မိရင္း တိုင္းရင္းသား ညီကိုေမာင္ႏွမေတြရဲ့ ရင္ထဲကို ပိုမိုနားလည္နိုင္ခဲ့မိရပါတယ္..
တခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ခင္ဗ်ားတို႔ခံစားခ်က္ေတြ ဘဝေတြကို ခုခ်ိန္ခါေလာက္ နားမလည္တတ္ခဲ့မိတာေတြကို ေတာင္းပန္လိုက္ပါရေစ…!
OK 0122L ဆိုတာကို သေဘာက်မိလို႔ပါ…။
ဘီးနံပါတ် OK 0122L
ငယ်စဉ်ထဲက ဒါက ဘာပြောချင်တာပါလိမ့် စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ် ။ ခုမှသိရတယ် ကိုယ်လိုပဲ မသိသူများအတွက်ဘီးနံပါတ် Ok 0122 L အဓိပ်ပါယ် ဦးထီးဆိုတဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ် ရေးခဲ့တဲ့သီချင်းတွေ ဖန်တရာတေအောင် နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ် ။
တစ်ချို့ သီချင်းလေးတွေက ကိုယ်ထင်သလို ချစ်တာ မေတ္တာအကြောင်းတွေ မဟုတ်ဘူး…တဲ့ !!!တိုင်းရေးပြည်ရေး.. အကြပ်အတည်းတွေ ကြားထဲမှာ..လူထုရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို ကိုယ်စားပြု မွေးဖွားလာတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ဖြစ်ပါသတဲ့… !
မနေ့ကမှ ဂရုတစ်ခုမှာ အစ်ကို တစ်ယောက် ပြောပြလို့ သိရတာ.. !!!ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ် ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဦးထီးရဲ့ မေမြို့မိုး သီချင်းဟာ…တောင်ပေါ်မြို့လေး ပြင်ဦးလွင်ကို မဆီမဆိုင် မန္တလေးတိုင်းထဲ ထည့်ခဲ့လို့… ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးပါတဲ့…
သံလွင်ချောင်းခြားဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက မြစ်ဟိုဘက်ကမ်း.. ဒီဘက်ကမ်းမှာ တပ်စွဲထားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ BCP တို့ရဲ့ အာဃာတကို ရေးဖွဲ့ခဲ့တာပါတဲ့ !!!ရှိသေးတယ်.. !!!ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ.. ခေါင်မလုံရင် စိုမှာပဲ… အစိုးရမကောင်းရင်.. ကိုယ် ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် အရာမထင်ဘူးလို့ ရွဲ့ဆိုခဲ့တာပါ…
ဟိုးဘက်ခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားကို မီးပေးတာက လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံကြီးပေါ့…လောပိတ ရေတံခွန်ကြီး ရှိနေတဲ့ကယားပြည်နယ်လေးကတော့ မှောင်လို့ မဲလို့ပေါ့လေ….အဲ့ဒီ့မှာ… ရန်ကုန်မှာ သာတဲ့လ… ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်လာရတာပါပဲ… !!!
သိပ်ပြီး ပညာသားပါတဲ့ သီချင်းလေး ရှိသေးတယ်…ကျနော်တို့ သိထားတဲ့…ဘီးနံပါတ်… OK 0122L ဆိုတဲ့ အပေါင်ဆုံး စက်ဘီးလေး အကြောင်းလေမင်းသခင်မလေး ခမြာလေ..သိပ်ကို စွဲလမ်းရှာနေ..ပြန်ရွေးလို့ ရခဲ့ရင် ပြန်ရွေးလို့ ပေးလိုက်ချင်တယ်..တဲ့
ဘီးနံပါတ်.. OK 0122Lဆိုတာ…ဖေဖော်ဝါရီ 12 ပြည်ထောင်စုနေ့က ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်မှာ သဘောတူခဲ့တဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို ရည်ရွယ်ပါသတဲ့..လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင် ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်လေးကို ပြန်လိုချင်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာ…
OK.. သဘောတူညီချက် စာချုပ်
0..(သုည) ဆုံးရှုံးတာ မရလိုက်တာ…
L…Law. ဥပဒေကို ရည်ညွှန်းပါသတဲ့…
ဒီအဓိပ်ပါယျလေးကို သိမှ ဒီသီချင်းလေး ပြန်နားထောင်တဲ့အခါ ရှမ်းတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ပိုပြီး နားလည်လာရပါတယ်..ဂီတ..အနုပညာဆိုတာ ဒါပါလား… !!!ဒီသီချင်းတွေ ရေးခဲ့တဲ့ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှု.. ဖန်တီးနိုင်မှုဟာ လေးစားစရာ
သီချင်းမဟုတ်တော့တဲ့ သီချင်းတွေပါပဲ ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဆို ဘယ်လိုမှ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး…ပြောပြတဲ့ အစ်ကိုကိုလဲ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ..သည်ပို့စ်လေးကို ဖတ်မိရင်း တိုင်းရင်းသား ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ရင်ထဲကို ပိုမိုနားလည်နိုင်ခဲ့မိရပါတယ်..
တချိန်က ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ခံစားချက်တွေ ဘဝတွေကို ခုချိန်ခါလောက် နားမလည်တတ်ခဲ့မိတာတွေကို တောင်းပန်လိုက်ပါရစေ…!
OK 0122L ဆိုတာကို သဘောကျမိလို့ပါ…။
အောင်လံလွှင့်ချီ နွေဦးထီ ထိုးရမယ့် အဆင့်ဆင့် ကို အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (ရုပ်သံ)
ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်းရင်း အိမ်ကိုလွမ်းနေကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်